Momba anao | Ny Fanorenana, ny Fitiavana, ny Firaisana ary ny Internet
Home Momba anao
Momba anao dia natao hanampiana anao hahita loharanom-bola mifanaraka amin'ny filànao, mpampiasa, ray aman-dreny, mpiara-miasa, matihanina na olona liana. Ho eo an-dalam-panamboarana ho an'ny herinandro vitsivitsy ho ampiana sokajy vaovao.
Ao amin'ny Foundation Reward dia mifantoka indrindra amin'ny sary vetaveta amin'ny Internet izahay. Mijery ny fiantraikany eo amin'ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-batana, fifandraisana, fahombiazana ary heloka bevava. Tianay ny manao fikarohana azo ampiharina amin'ireo tsy mpahay siansa mba hahafahan'ny tsirairay manao safidy tsara momba ny fampiasana sary vetaveta amin'ny aterineto. Isika dia mijery ny tombotsoa amin'ny fialana vetaveta mifototra amin'ny fikarohana sy ny tatitra momba ireo efa nanandrana nandao azy. Manome tari-dalana momba ny fanamafisana ny herisetra amin'ny fihenjanana sy ny fiankinan-doha.
Ny Foundation Reward dia nametraka ny asany amin'ny famaritana ny fahasalamana ara-pahasalamana manerantany:
Ny tranokalanay dia tsy mampiseho sary mamoafady.
Raha te-hahita antsika hanangana pejy ho an'ny vondrona manokana hafa ianao, azafady mba lazao anay amin'ny fampiasana ny endrika fifandraisana eto ambany.
Manomboka eto dia afaka mifandray amin'ny pejy ianao…
Ireo loharanom-pitaovana ampiasaina amin'ny 12s
Loharanom-pitaovana ho an'ny tanora